Ikhaya » Iindaba zoMsebenzi woHamba » Abagibeli ababini baseRoyal Caribbean bavavanya i-COVID-19 kuhambo lokugonya ngokupheleleyo
I-Millennium yoSaziwayo yenye yeendlela zokuqala zokuhamba ngenqanawa eMntla Melika ukuqala kwakhona ukuhamba ngenqanawa emva konyaka kwaye yeyona nqanawa inkulu yokugonya i-COVID-19 emhlabeni ukuza kuthi ga ngoku.
Ukugonywa ngokupheleleyo kwabagibeli bohambo lwaselwandle lweMillennium kuvavanyo lwe-coronavirus
Abakhweli abakhange babonakale kwaye ngoku bebodwa
Bonke abasebenzi kunye nabakhweli abadala kuye kwafuneka babonise ubungqina bokugonywa ngokupheleleyo kunye novavanyo olubi lwe-COVID-19 ngaphambi kokubhoda
Abakhweli ababini ebhodini ye Royal CaribbeanInqanawa yokuSebenzisa iiMillennium yoSaziwayo iye yavavanya intsholongwane ye-coronavirus, umqhubi wenqanawa wabhengeza.
Ngokutsho kweRoyal Caribbean, abakhweli abanasifo kwaye bahlala bodwa.
Abagibeli, ababelana ngekhabhathi, bajongwa liqela lonyango laseRoyal Caribbean, kwaye umqhubi wenqanawa wenza umkhondo wokunxibelelana, ekhawulezisa uvavanyo kubo bonke abafowunelwa abasondeleyo.
I-Millennium yoDumo yayilelinye leenqanawa zokuqala eMntla Melika ukuqala kwakhona ukuhamba ngesikhephe kwiveki ephelileyo, emva konyaka kwaye yeyona nqanawa inkulu igonyelweyo i-COVID-19 emhlabeni ukuza kuthi ga ngoku.
I-Millennium yoSaziwayo inokuhlalisa abantu abangama-2,000 30, kodwa ngoku isebenza malunga ne-XNUMX% yomthamo.
Ngoku ka Royal Caribbean, bonke abasebenzi beenqanawa zokuhamba ngenqanawa kunye nabo bonke abakhweli beenqanawa zokuhamba ngenqanawa kwi-Celebrity Millennium kwafuneka babonise ubungqina bokugonywa ngokupheleleyo kwaye babonelele ngovavanyo olubi lwe-COVID-19 ngaphambi okanye ngexesha lokukhwela.
IRoyal Caribbean yaqala ukuhamba ngolwandle ngoJuni emva kokudibana kwamaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo lweZifo (CDC) izikhokelo ezibandakanya abasebenzi abagonywe ngokupheleleyo kunye nomntu wonke ongaphezulu kwe-16 obonisa ubungqina bokugonywa ngokuchasene ne-COVID-19.
Abaqhubi beenqanawa baba phakathi kwabokugqibela ukubuyela kwimisebenzi yabo yangaphambi kobhubhane njengoko i-CDC yabeka isikhokelo esingqongqo kulo nyaka kumzi-mveliso wokuhamba ngenqanawa kwakhona, emva kokuba ezinye iinqanawa zaba yindawo yokutshisa intsholongwane kunyaka ophelileyo.